काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको भर्खरै दोस्रो जागरण अभियान सम्पन्न भएको छ । कम बोल्ने र धेरै सुन्ने भिजन बोकेर ७७ वटै जिल्लामा दोस्रो जागरण अभियान सुरु गरेको काँग्रेसले यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । जागरण अभियान कति सफल भयो र यसले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? भन्ने बारेमा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग बिना भट्टराईले गरेको कुराकानी :
भर्खरै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको दोस्रो जागरण अभियानबाट पार्टीलाई कति सफलता मिल्यो ?
यो जागरण अभियानको सफलता अघिल्लो चरणको समीक्षात्मक टिप्पणीबाट प्रष्ट हुन्छ । अघिल्लोपटक ७७ जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी कार्यक्रम गरिएका थिए । अहिले झण्डै त्यसको पाँच गुणा बढी कार्यक्रम भएको प्राविधिक विश्लेषण छ । किनकि ७ हजार बढी वडा कार्यालय नै छन् । वडास्तरका कार्यक्रम र कतिपय दोहो¥याएर पनि फरक प्रकृतिका कार्यक्रमहरु भएका छन् । गाउँस्तरीय, नगरस्तरीय, प्रदेशस्तरीय, जिल्लास्तरीय र वडास्तरीय गरी संख्यात्मक हिसाबले पनि बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । अर्को, नागरिक पंक्तिमा वा पार्टी पंक्तिमा पनि बढी पुग्ने हिसाबले पनि पहिले ७७ जिल्लामा ७७ जना खटिनु भएको थियो । अब अहिले ३३० वटा प्रदेश र क्षेत्रमा ३३० जना प्रतिनिधि खटिनु भएको थियो । यस हिसाबले पनि कार्यक्रममा पहिलेभन्दा रौनक बढेको छ । अर्को चाहिँ पहिलो चरणको जागरण अभियानमा जाँदा तलका अन्तरिम संरचना थिएनन् । अहिले चाहिँ संरचना निर्माण भएर हामी गएका छौँ । अधिकांश ठाउँमा अन्तरिम संरचना निर्माण गरिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि दोस्रो जागरण अभियान पहिलेभन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ ।
आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको असहयोगले दुबै जागरण अभियान विफल भयो भन्ने टीकाटिप्पणी छ नि ?
अब कोही मान्छे बिहानै उठेर योगा गर्नतिर लाग्छ । कोही हरियो सागपात खानतिर लाग्छ । त्यसको पनि आलोचना हुन्छ । त्यसको के जवाफ हुने ? किनभने काँग्रेस जागरण अभियानमा जानु भनेको सुतिरहेको थियो, उठेर गयो भन्ने हैन । कोही मान्छे विरामी भएर मात्रै योगा गर्दैनन् । बिरामी नहुनलाई योगा गर्छन् । हरियो सागपात स्वस्थ रहनलाई खान्छन् । काँग्रेस पार्टी जागृत हुने, जनताका बीचमा आफ्ना कुरा लिएर जाने भन्ने कुरा बिलकुल स्वभाविक र आवश्यक कार्यक्रम हो । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले ३÷३ चरणको यस्तो व्यवस्थित कार्यक्रम गरेका थिएनन् । बोल्ने कम, सुन्ने बढी भनिएको थियो यसपालि । सुन्ने कुरामा पनि कसैले आलोचना गर्छ भने त्यो बुझाइको कमी हो । यो पटकको जागरण अभियानमा पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्ताले जसरी कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, यो जागरण अभियानमा त्यो भएन । सबैजना सहभागी हुनु भयो । जागरण अभियानमा अमूक तलका नेता जान चाहनु भएन वा जानु भएन भन्ने कतै तथ्य भेटियो भने पो एकदमै असहमति रहेछ भन्ने हो । यो अभियानले त घरमा बसिरहेको नेतालाई पनि उठाएर गाउँको मञ्चमा पठाएर प्रमुख अतिथि बनायो । जहाँ सबैजना सामेल हुनुहुन्छ । कसैले पनि त्यो किसिमको नकारात्मक टीकाटिप्णी गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
हामीले सरकारलाई यति शालीन ढंगमा सघाएका छौँ । ४८ सालदेखि ५० सालसम्मको प्रतिपक्ष सम्झनु भयो भने त्यो २ वर्षको बीचमा दर्जनौँपटक नेपाल बन्द र उपत्यका बन्द भए । दर्जनौँ गाडीहरु जले । त्यो खालको प्रतिपक्ष अहिले छैन । कमजोर भएको आरोप लाग्ला । त्यो आरोप हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । त्यसको अर्थ बलियो हुने नाममा टायर बालेर, सडकमा धुँवा फैलाएर वारिपट्टी सत्तापक्ष, पारिपट्टी विपक्ष । हामी त्यो बनाउन चाहन्नौँ । हामी कुनै बन्दको आयोजना गरेर वीर अस्पताल पुग्नुपूर्व गर्भवती महिलाको बाटोमै एम्बुलेन्सभित्र मृत्यु भयो, हामी त्यो अवस्था गराउन चाहन्नौँ । बाराको जंगलमा काजुल खातुनहरु बसभित्रै जलेको जस्तो तोडफोड हामी गर्न चान्नौँ । त्यो तोडफोड गर्दा बलियो देखिन्छ भने त्यो खाले प्रतिपक्ष देशका लागि राम्रो हुदैन । हाम्रो छवि, हाम्रो परम्परा त्यो होइन । त्यसैले हामी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा उभिन्छौँ ।
नेपाली काँग्रेसको मेरुदण्ड मानिने नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल भताभुङ्ग राखेरै जागरण अभियानमा होमिनु कति उचित ?
बिल्कुलै गलत हो । सामेल नगरेर भन्ने हैन । नेपाल विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय कमिटी छैन । त्यसको अर्थ नेपाल विद्यार्थी संघ नै छैन भन्ने हैन । तरुण दलभित्र केही विवाद आयो । त्यसको अर्थ जागरण अभियानमै नजानु भन्ने हैन । मर्निङ वाकमा हिँडिरहेको मान्छे अचानक ग्यास्ट्रिकले दुख्यो भनेर तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल जानतर्फ लाग्दैन । ऊ मर्निङ वाक पूरा गर्नतर्फ लाग्छ । मर्निङ वाक गर्दागर्दै दाँत दुख्यो भनेर भोलिबाट मर्निङवाकै नगर्ने कुरा हुँदैन । तसर्थ के हो भने तरुण दलभित्र त्यो किसिमको समस्या नआउनु पर्दथ्यो । त्यो दुःखद भयो । त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ र के गर्ने भन्ने योजनामा पनि छौँ । यसले चाँडै निकास पाउँछ । नेविसंघको कमिटी पनि चाँडै गठन हुन्छ ।
तितरबितर भएका नेविसंघ र तरुण दलले कहिले पूर्णता पाउँछन् ?
पहिलो र दोस्रो जागरण अभियानको बीचमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि सकिएका भातृ संगठनहरुको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एउटा कार्यसमिति निर्माण ग¥यो, एनपी साउदको संयोजकत्वमा । विधानमा एकरुपता ल्याउने लगायतका विषयमा काम गर्ने भएको छ । समयावधि सकिएका भातृ संस्थाहरुका बारेमा समान ढंगको व्यवहारका साथ सबैलाई नेतृत्वबाट विदाई गर्ने त्यो पनि हुन सक्थ्यो । तर विदाइ गर्दैगर्दा फेरि अर्को नेतृत्व चयन गर्दा आउने द्वन्द्व, फेरि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन लाग्ने समय, यी सबैलाई बुझेर हामीले सबै भातृ संगठन, जसको समयावधि सकिएको छ, उनीहरुलाई हामीले ६ महिनाको समयावधि दिएका छौँ । ६ महिनाभित्र जसले महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरुले सम्मानपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ । जसले महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुलाई पार्टीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्छ ।
सरकार मात्रै हैन, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस पनि निस्क्रिय देखिन्छ । यो समयमा नयाँ योजना के छन् ?
प्रतिपक्ष दलले सरकारले गर्ने कमीकमजोरीमा ऐना देखाउने हो । प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न अंग हो । संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमा को कहिले सत्तापक्ष, को कहिले प्रतिपक्ष हुन्छ । प्रतिपक्षको कर्तव्य भनेकै सरकारका कमी कमजोरी औंल्याएर सरकारलाई ऐना देखाउने, सरकारले राम्रो काम ल्याउनै लाग्दा सहयोग गर्ने भन्ने हो । हामीले तपाईको अनुहारमा धुलो छ भन्दा धुलो हाम्रो अनुहारमा छैन, ऐनामै छ भनेर गालीको एउटा कविताको शक्ति प्रयोग गरे भने, त्यसले सरकारकै अलोकप्रियता बढ्छ । हामीले सरकारलाई यति शालीन ढंगमा सघाएका छौँ । ४८ सालदेखि ५० सालसम्मको प्रतिपक्ष सम्झनु भयो भने त्यो २ वर्षको बीचमा दर्जनौँपटक नेपाल बन्द र उपत्यका बन्द भए । दर्जनौँ गाडीहरु जले । त्यो खालको प्रतिपक्ष अहिले छैन । कमजोर भएको आरोप लाग्ला । त्यो आरोप हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । त्यसको अर्थ बलियो हुने नाममा टायर बालेर, सडकमा धुँवा फैलाएर वारिपट्टी सत्तापक्ष, पारिपट्टी विपक्ष । हामी त्यो बनाउन चाहन्नौँ । हामी कुनै बन्दको आयोजना गरेर वीर अस्पताल पुग्नुपूर्व गर्भवती महिलाको बाटोमै एम्बुलेन्सभित्र मृत्यु भयो, हामी त्यो अवस्था गराउन चाहन्नौँ । बाराको जंगलमा काजुल खातुनहरु बसभित्रै जलेको जस्तो तोडफोड हामी गर्न चान्नौँ । त्यो तोडफोड गर्दा बलियो देखिन्छ भने त्यो खाले प्रतिपक्ष देशका लागि राम्रो हुदैन । हाम्रो छवि, हाम्रो परम्परा त्यो होइन । त्यसैले हामी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा उभिन्छौँ । जनताले दिएको म्याण्डेडबमोजिम हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ । अहिले हामीले पहिले सरकारमा हुँदा गरेका कामहरु सार्वजनिकरुपमा बुझाउछौँ । आगामी दिनमा हामी सरकारमा जाँदै गर्दा केही निश्चित योजनाका साथ जाने तयारीमा छौँ ।
तर सरकारले पनि यतिमात्रै त हारेका हौँ नि हामीले, जमिन कहाँ खस्केको छ र ? दुई तिहाइको बहुमत त बाँकी नै छ भन्न हुँदैन । जनमत निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ । मत चाहिँ रिजिट हुन्न बाकसमा गएर खसेपछि । जुन चिन्हमा छापो लगाएको हो त्यो मत हुन्छ । त्यसले जीत हुन्छ । तर जनमत बदलिरहन्छ । जनमत बदलिरहेको छ । यो बदलिएको जनमतलाई संगठित गरेर काँग्रेसलाई आगामी दिनमा सुदृढ बनाउने प्रयासमा छौँ ।
पछिल्लो समय भएका विभिन्न संघसंस्थाका चुनावमा काँग्रेसले निकै राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको छ । यो जागरण अभियानको प्रभावले हो वा नेकपाको कमजोरी ?
निर्वाचनका पछिल्ला जुन परिणामहरु आइरहेका छन्, त्यो सरकारको विपक्षमा र नेपाली काँग्रेसको पक्षमा देखिराखेका छन् । अन्य क्षेत्रको कुरै छोडौँ, झापामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा र चितवनमा कमरेड प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र हेरौँ । ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा अध्यक्षसहित बहुमतै काँग्रेसले जित्यो । यता प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी संघको निर्वाचनमा पनि काँग्रेस नै विजयी भयो । भर्खर वैदेशिक रोजगार संघको निर्वाचन भो । त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसले सफलता प्राप्त ग¥यो । यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ । एउटा, काँग्रेस पार्टीतर्फ पहिलेभन्दा आकर्षण बढेको । काँग्रेसले पहिलेभन्दा आफूलाई रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरेर बिस्तारै हामीले मतलाई संगठन गर्नतर्फ लग्यौँ । त्यसमा जागरण अभियानले पनि बल पु¥यायो । अर्को, राजनीतिमा एउटा के यथार्थ हुन्छ भने कसैले कसैलाई समर्थन गरिरहँदा कसैका बारेमा दण्डित गर्न खोजेको सन्देश पनि हुन्छ । किन अहिले केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेस सफल भयो र स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो तत्कालीन एमाले, दोस्रोमा माओेवादी, तेस्रोमा राप्रपा र चौथोमा काँग्रेस रह्यो ? त्यो बेला किन काँग्रेस पहिलो हुन सकेन ? त्यसको गणितीय, त्यसको राजनीतिक र त्यसको मनोवैज्ञानिक अर्थ छ । प्रचण्ड कमरेडमा पनि किन त्यो ढंगको भएन ? यसको पनि अर्थ छ । त्यसैले यी परिणामलाई हेरेर नै सबै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । काँग्रेस पनि यति धेरै हौसिहाल्नु हुँदैन । हामी एकदमै लोकप्रिय भएछौँ । हामी जित्ने भएछौँ । दुई तिहाई जनमत सारा उल्टियो । त्यो सोच्नुहुन्न । तर सरकारले पनि यति मात्रै त हारेका हौँ नि हामीले, जमिन कहाँ खस्केको छ र ? दुई तिहाइको बहुमत त बाँकी नै छ भन्न हुँदैन । जनमत निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ । मत चाहिँ रिजिट हुन्न बाकसमा गएर खसेपछि । जुन चिन्हमा छापो लगाएको हो त्यो मत हुन्छ । त्यसले जीत हुन्छ । तर जनमत बदलिरहन्छ । जनमत बदलिरहेको छ । यो बदलिएको जनमतलाई संगठित गरेर काँग्रेसलाई आगामी दिनमा सुदृढ बनाउने प्रयासमा छौँ । र अन्तमा दैनिक अनलाइनको सुरुवात गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगमा यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् । मेरो शुभकामना !